तपाइँको वैज्ञानिक स्नातक थीसिस पेशेवर लेखिएको छ। हामीसँग तपाईं अनुभवी, शैक्षिक भूत लेखकबाट द्रुत मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्।
स्नातक शोध - आफै लेख	वा	लेख्न दिनुहोस्
मर्न स्नातक शोध प्रासंगिक अनुसन्धान शीर्षकमा पहिलो शैक्षिक थीसिस हो। यसले करीव २० देखि 20 pages पृष्ठहरू समावेश गर्दछ र प्रशोधन समय सामान्यतया २ देखि to महिना हुन्छ। को सहयोगमा स्नातक शोध एक अनुसन्धान अंतर बन्द गरिनु पर्छ।
स्नातक थीसिस - एक सभ्य थेसिसमा के समावेश हुनुपर्दछ?
das स्नातक थीसिस लेख्दै तपाइँको शिक्षाको पहिलो शैक्षिक स्तरको अन्तिम परीक्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ। थेसिस बनाएर, विद्यार्थीहरूले अनुसन्धान-प्रासंगिक विषयहरूमा काम गर्न उनीहरूले मूल रूपमा सिकेका विधिहरू लागू गर्नुपर्दछ। सामान्यतया, स्नातक थीसहरू सामान्यतया एक विषयमा अनुसन्धान प्रश्नको प्रसंस्करणको साथ सौदा हुन्छ जुन पहिले नै व्यवहार गरिएको छ। जर्मनमा तसर्थ, ज्ञानको एक संकलन जुन पहिले नै प्राप्त भइसकेको छ। यद्यपि धेरै विद्यार्थीहरू यस फराकिलो कामबाट अभिभूत महसुस गर्छन्। त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन!
स्नातक थीसिस को लागी सही शीर्षक
धेरै विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त स्नातक शोध विषय खोज्न वा अनुसन्धान प्रश्न निर्माण गर्नमा गाह्रो हुन्छ। के तपाईंलाई पनि त्यस्तै समस्या छ? वा तपाईंलाई उपयुक्त अनुसन्धान अन्तर खोज्न मद्दत चाहिन्छ?
सामान्य नियमको रूपमा, विद्यार्थीहरूले ती विषयहरू छनौट गर्नुपर्दछ जसमा उनीहरू गहिरो चासो देखाउँछन्। उदाहरण को लागी, तपाइँ विशेष रूप मा आफ्नो विषयवस्तु को विषय वा विषय क्षेत्र मन पराउनुभयो? यदि तपाईं यस प्रश्नको जवाफ होमा दिन सक्नुहुन्छ भने, तपाईं पहिले नै एक कदम अगाडी हुनुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईंको विषयको हालको साहित्य के हो स्पष्ट गर्न अझै बाँकी छ। तपाइँ आफ्नो तर्क समर्थन गर्न राम्रो स्रोतहरु पाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं यस प्रश्नको हो जवाफ दिन सक्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं आफ्नो कामको योजना बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं हो भने यी दुई प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्न, वा यदि तपाईंलाई कुनै विषय सुम्पिएको छ जुन तपाईं पटक्कै वास्ता गर्नुहुन्न भने, चीजहरू फरक देखिन्छन्। यद्यपि यससँग मद्दत लिन कुनै शरम छैन। तथाकथित कोचिंग, तपाई सामान्यतया आफ्नो प्रोफेसरबाट प्राप्त गर्दा पक्कै पनि अनुमति छ। हामी अनुसन्धान र तपाईंको अनुसन्धान प्रश्नको सहि निर्माणको साथ सहयोग गर्न खुसी छौं। हाम्रो धेरै वर्षको अनुभव र हाम्रा कुशल कर्मचारीहरूबाट लाभ उठाउनुहोस्। हामी सँगै एक समाधान खोज्नेछौं।
"वाह, म संग धेरै राम्रो पारित भयो! धेरै धेरै धन्यवाद!"
अन्तर्क्रियात्मक मिडियामा स्नातक
स्नातक थीसिस को संरचना - तपाइँ थीसिस लेख्दा तपाइँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ
कुनै पनि शैक्षिक कार्य जस्तै, त्यहाँ स्नातकको थीसिसको लागि नियमहरू पनि छन् जुन पछ्याउनुपर्दछ। स्नातक थीसिसको वास्तविक संरचनामा कभर शिट, सामग्रीको तालिका र अन्य निर्देशिकाहरू, पाठ अंश, साथै एक ग्रंथसूची र परिशिष्ट समावेश हुन्छ। यद्यपि यो कुर्सी र डिग्री प्रोग्रामको आधारमा फरक पर्न सक्छ।
जे होस्, निम्न कारकहरू सामान्यत: मान्य छन्:
प्राय: विश्वविद्यालयबाट टेम्पलेटको रूपमा उपलब्ध छ तन्ना तपाईंको अनुहार स्नातक शोध यसले कामको शीर्षक, लेखक, पर्यवेक्षण प्राध्यापक र विश्वविद्यालयको विवरण समावेश गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो स्नातक थीसिस लेख्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको काममा डिलिएका विषयहरूको बारेमा एक ओभर सिंहावलोकन दिन र आवश्यक तर्कको संरचना स्पष्ट पार्न, कभर पाना अनुसरण गर्दछ। सामग्रीहरू। सामग्रीको तालिकाले मुख्य र उप-विषयहरूलाई मुख्य र उप-अध्यायहरूमा विभाजन गर्दछ र पृष्ठ संख्याहरूलाई संकेत गर्दछ। यहाँ शिष्ट र नियम अनुरूप ढाँचामा ध्यान दिन पनि महत्वपूर्ण छ, जुन शैलीको आधारमा फरक हुन सक्छ।
थप डाइरेक्टरीहरू जस्तै आंकडा, संक्षेपहरू र तालिकाहरूको सूची
यो निर्देशिकाहरू ग्रंथसूची पछि सिधा आउनुहोस्, तर प्राय: अन्तिम चीज हुन्छ जुन कागजमा समाहित हुन्छ। न त तिनीहरू सँधै कामको आधारभूत हिस्सा हुन्, किनकि यो कति निर्भर गर्दछ तालिकाहरू, संक्षिप्त र चित्रण तिनीहरूलाई तपाईंको काममा प्रयोग गर्नुहोस्। जे होस्, ती पाठकलाई अगाडि पाठको पाठ्यक्रम भित्र अतिरिक्त वर्णनात्मक सामग्री वा सरलीकरणको एक सिंहावलोकन दिन्छ र महत्त्वपूर्ण चित्रणहरू छिटो पछि फेला पार्न सजिलो बनाउँदछ।
पाठ अंश - तपाईको स्नातक थीसिसको मुटु
अब यो वास्तविक काममा आउँछ, अर्थात् तपाईंको तर्क पाठको लेखन। आधारभूत आवश्यकता एक स्पष्ट संरचित रूपरेखा हो जुन तपाइँले तपाइँको थीसिस लेख्न सुरू गर्नु अघि सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसको साथ तपाईले तपाईको स्नातक थीसिसमा साझा थ्रेड राख्नुहुन्छ र लेख्दा समग्र समग्र तस्वीरमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। संरचना निश्चित तरिकामा कार्य गर्दछ निर्देशनका लागि निर्देशन पुस्तिकाको लागि तपाईको स्नातक शोध पत्र लेख्दै। पाठ अंशमा पनि, प्रचलनित स्वरूपण आवश्यकताहरू अवलोकन गरिनुपर्दछ र साहित्य स्रोतहरू प्रयोग गर्दा सही उद्धरण शैली।
विशेष गरी जब महत्त्वपूर्ण छ ग्रंथसूची यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि साहित्य सन्दर्भहरू पूर्ण छन्, किनकि चोरी चोरीले तुरून्त तपाईको विफलतामा पुर्‍याउँछ स्नातक शोध। यहाँ विशेष रूपमा, फर्म्याटि apply नियमहरू लागू हुन्छन् जुन कामलाई सच्याउँदा खासै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् किनकी ती तपाईँको विधिगत दृष्टिकोण र शैक्षिक ज्ञान प्रतिबिम्बित गर्दछन्। शैलीमा निर्भर गर्दै, जानकारी प्रदान गर्ने तरिकामा धेरै भिन्न हुन्छन्, त्यसैले किन तपाईको कुर्सीलाई विस्तृत रूपमा परामर्श गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तपाइँको काम बन्द राउन्ड गर्न appendixत्यो शब्द वा तपाईंको वास्तविक कामको पृष्ठ गणनामा समावेश छैन। जे होस्, परिशिष्टले तपाईंलाई अतिरिक्त सामग्रीको साथ तपाईंको काम बन्द गर्ने र तपाईंको तर्क संरचना समर्थन गर्ने अवसर दिन्छ। तपाईं यहाँ आवश्यक सामग्रीहरू पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ जुन काममा फिट हुँदैन (अबदेखि)।
तर अब के गर्नुपर्दछ यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि अब के गर्ने?
तसर्थ, तपाईंसँग भूत लेखन एजेन्सी द्वारा लिखित आफ्नो स्नातक थीसिस हुनु पर्छ
तपाईको स्नातक थीसिसको साथ पेशेवर समर्थन
हामी तपाईंलाई सुरुबाट समाप्त गर्न मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं!
हामी सहि फेला पार्नेछौं तपाईको स्नातक थीसिस को लागी विषय। एक्सपोजरको तयारीको साथ सुरू गर्दै: समस्या वा प्रश्न र अनुसन्धान स्थितिबाट लक्ष्य / परिकल्पना, विधि र संरचनामा प्रारम्भिक ग्रंथसूची। सारांशलाई धन्यवाद, तपाईं थीसिसको सामग्री र संरचना ट्र्याक राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको अनुसन्धान अधिक कुशलतापूर्वक व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ।
संग अनुभवी घोस्टराइटरहरू केवल तपाइँको एक नमूना प्राप्त नगर्नुहोस् स्नातक शोधतर विशेषज्ञ अन्तर्वार्ता र मूल्यांकन संग पूर्ण प्रक्रिया। उत्कृष्ट रूपमा घोस्टराइटिंग एजेन्सी हामी तपाईंलाई पूर्ण आश्वासन दिन्छौं विवेक र बेनामी
लेखन मा सफल, तर प्रश्न, सूत्रहरु र अधिक को बारे मा अनिश्चित?
हाम्रो सम्पादन र प्रूफरीडिंगले दुबैलाई सुधार गर्दछ भाषिक गुणस्तर पनि प्राविधिक तपाईंको योग्यता थेसिस। बस भनेर प्रोफ्रेडि।, धेरै गल्तीहरू हटाइन्छ र अतिरिक्त काम तपाईंको लागि गरिन्छ।
विद्यार्थीहरू प्राय: तिनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर बिर्सन्छन् दबावको कारण चरित्र, फुटनोटहरू, को उपयोग औचित्य र अधिक धेरै। हामीसँग सबै विषयहरूका लागि विशेषज्ञहरू छन्, ताकि तपाईं जहिले ग्राहकको रूपमा सहि सम्पादक फेला पार्न सक्नुहुनेछ, जसलाई सहि प्रावधानहरू पनि थाँहा हुन्छ।
तपाईको स्नातक थीसिस लेखिएको छ वा प्रुफरीडिंग र कागजपत्रहरूको फाइदाको मजा लिनुहोस्।
एकदम कानूनी, छिटो र व्यावसायिक!
तपाईंको सबमिशन अन्तिम म्याद नजिकै छ, तपाईं अझै पनी अध्ययन र आउँदो विश्वविद्यालय परीक्षा को बारे मा जान्नु पर्छ समय समस्याहरु जारी गर्न असमर्थ? समस्या छैन! हामी संग तपाईं पाउनुहुन्छ व्यावसायिक सहयोग एक अनुभवी र बाट सक्षम घोस्टराइटर, विषयलाई ध्यान नदिई! हाम्रो भूत लेखकहरू उनीहरूको क्षेत्रमा साहित्यको एक विस्तृत र अप-टु-डेट सिंहावलोकन छ, प्रासंगिक शब्दावलीसँग धेरै परिचित छन् र कसरी विषय-विशेष विधिहरू सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्दछ तपाईंको तपाईंको सुधार गर्न। स्नातक शोध सफलतापूर्वक पूरा गर्न। तपाईंको पक्षमा रहेको हाम्रो टोलीसँग, तपाईं आगामी परीक्षाहरूको लागि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वैज्ञानिक कामको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन स्नातक थेस गर्नुहोस्!
स्नातक थीसिसको बारेमा प्रश्न र के महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँ यसलाई लेख्न दिनुहोस्
स्नातक थीसिस लेख्न कति महँगो छ?
नियमको रूपमा, हाम्रा लेखकहरू १ bac--14१ दिन भित्र तपाईंको स्नातक थीसिसमा काम गर्छन्। विशिष्टता र शीर्षकमा निर्भर गर्दै, यो व्यक्तिगत हो। यो पनि मूल्य हो निर्दिष्ट गरिएको छैन। किनभने लेखकले तपाईको स्नातक थीसिस लेखेको समयमा उनी निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्थे। को लागत लाई ध्यानमा राख्नुहोस् विशेषज्ञ लेखक सामान्यतया कमाई गरियो, किनकि यसले तपाईंलाई समान समयको वरिपरि लिनेछ।
स्नातक थीसिस लेख्न कति समय लाग्छ?
हाम्रो लेखकहरु गर्न सक्छन् १-14--31१ दिन भित्र एक स्नातक शोध पत्र लेख्नुहोस्। गर्नaतपाईका लागि उत्तम स्नातक थीसिस लेख्दा तपाईको क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ लेखक लिने छ जब सम्म तपाईं को लागी।
पेपरनरड्सले डक्टरेट र आवासको साथ लेखकहरू कमिसन गर्छ जसले तपाईंलाई कामको धेरै राम्रो अंश लेख्न सक्छ। तपाईंलाई उच्च गुणवत्ता र सबै पूर्ण स्नातक थीसिस माथि ग्यारेन्टी दिन सक्षम हुनको लागि, राम्रो समय मा सोध्नुहोस्.
अवश्य पनि, एक अनुभवी लेखकले तपाईको स्नातक थीसिस धेरै छोटो समयमा लेख्न सक्दछ, तर यसले अनिवार्य रूपमा तपाईको कामको गुणस्तर र सम्पूर्णता कम गर्दछ।
कसले मेरो स्नातक थीसिस को लागी मद्दत गर्न सक्छ?
अनुभवी व्याख्याताहरू, डाक्टरहरू र अन्वेषकहरू जससँग तपाईंले अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुनेछ, तपाईंसँग कोच वा हामीबाट सिफारिश गरिएको लेखकसँग काम गर्ने अवसर छ।
हामीसँग डकुरेटरेट र हाइबिलिटेशनका साथ धेरै राम्रा लेखकहरू छन्, साथ साथै केही स्थानहरूमा प्राध्यापक इमेरेटस छन् जसले तपाईंलाई तपाईंको स्नातक थीसिसको साथ मद्दत गर्न सक्छ।
के तपाईले तपाईको स्नातक थिसिस किस्तामा तिर्न सक्नुहुन्छ?
पेपरनरड्समा तपाईसँग पक्कै पनि किश्तोंमा तपाईको स्नातक थीसिस भुक्तान गर्ने विकल्प छ। हामी खुसी छौं भाग वितरण र अंश भुक्तान व्यवस्था
वास्तवमा कसले लेखिरहेको छ?
यो हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण छ कि गुणस्तर सही छ। यो नै हो किन हामी केवल अनुभवी व्याख्याताहरु, शिक्षाविज्ञहरु र सम्बन्धित विभागका भूत लेखकहरु संग काम गर्छौं। जो कोहीसँग हामीसँग स्नातक थीसिस लेखिएको छ उसको भूत लेखकसँग समन्वय गर्न र विस्तृत सल्लाह दिन पनि अवसर हुन्छ। के तपाइँ हाम्रा लेखकहरूको योग्यताहरूको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस कृपया!